Taliska Ciidanka Booliska hogaankiisa baarista danbiyada oo saxaafada u soo bandhigay 15 dhalinyaroo oo ay sheegeen in ay yihiin ........ ( DAAWO SAWIRADA ) | Somalisan.com Home
Taliska Ciidanka Booliska hogaankiisa baarista danbiyada oo saxaafada u soo bandhigay 15 dhalinyaroo oo ay sheegeen in ay yihiin ........ ( DAAWO SAWIRADA ) 10/4/2012 7:04:00 P
taliyaha hogaanka danbi barista ee C I Da Genaraal C/laahi Xasan Bariise oo shir jaraaid uu kaga warbixinayo dhalinyaradaani iyo 40 maxbuus oo wali xiran waxa uu warbaahinta ugu qabatay xarunta C .I. D da isagoona sheegay in ay dhalinyaradaani u gudbin doonaan maxakamada
Hogaanka danbi barista ciidnka booliska soomaaliyeed ayaa soo bandhigay 15 kani dhalinyarada ah oo ay ku sheegeen in ay yihiin gacan ku dhiiglayaal ka danbeeyay dilal ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaa oo ay tilmaameen in gacanta ay ku soo dhigeen baaritaan dheer kadib islamarkaana ay ku cadaadatay danbiyada loo heysto.
taliyaha hogaanka danbi barista ee C I Da Genaraal C/laahi Xasan Bariise oo shir jaraaid uu kaga warbixinayo dhalinyaradaani iyo 40 maxbuus oo wali xiran waxa uu warbaahinta ugu qabatay xarunta C .I. D da isagoona sheegay in ay dhalinyaradaani u gudbin doonaan maxakamada intaa kadinb waxaa uu taliyaha faahfaahin ka biyay howlwl galada ciidanka booliska ay ka wadaan gudaha magaalada Muqdisho isagoona shacabka ugu baaqay in ay la shaqeeyaan.
Taliyaha laanta dambi-baarista booliiska, Jeneraal Cabdullaahi Xasan Bariise ayaa u sheegay wariyeyaasha in raggan lagu soo qabqabtay howlgallo maalmihii lasoo dhaafay laga sameyanyay Muqdisho laguna sameeyay baaritaanno lagu caddeeyay inay dambiyada loo haysto geysteen.
"Raggan waxay ka tirsanaayeen Al-shabaab, waxayna Muqdisho ka geysteen dilal qorsheysan, dambiyadana waa ku caddaadeen, maxkamad ayaana u gudbinaynaa," ayuu yiri Jen. Bariise oo intaas ku daray in howgallada ay soconayaan inta raggan oo kale laga nadiifinayo magaalada.
Jen. Bariise oo sidoo kale afhayeenka booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in raggan lasoo qabqabtay xaafado ka tirsan degmooyinka Muqdisho oo ay si dhuumaaleysi ah ku joogeen, wuxuuna u digay xubnaha Al-shabaab ee weli ku sugan Muqdisho.
inta badan waxaa degmooyinka Gobolka Banaadir ka dhaca dilal qorsheeysan inkastoo qaar ka mid ah Gobolda dalka ay iyana ka dhacaan dilaalkaa ayaa taliyaha ciidanka boolisku waxa uu shirkiisa ku sheegay in ay iminka wadaan olole balaaran oo ay kaga hortagayaan dhamaan falalakaasi.
iskastoo ay maalmihii ugudanbeeyey ay magaalada Muqdisho xasiloontahaya ayaa hadda waxaa barbar socdo holwgalo balaaran oo ay wadaan ciidamada amaanku kuwaas oo lagu qabqabto boqolaal dhalinyaro ah kuwaas oo qaarkood loo gudbiyo xabsiyada Warar kale oo xiiso leh halkaan ka aqriso. tweet FG: Shabakada Wararka ee Somalisan Mas'uul kama ahan Cidii ku xadgudubto Shaqsi Raalina kama noqonayso Somalisan.com. Fikirkaaga hoos kadhiibo: